UEFA oo markii ugu horreeysey ka hadashay khaladaadkii garsoor ee kulankii Milan-Atletico (Waxa xigi kara & Milan oo…?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka UEFA oo markii ugu horreeysey ka hadashay khaladaadkii garsoor ee kulankii Milan-Atletico...
UEFA oo markii ugu horreeysey ka hadashay khaladaadkii garsoor ee kulankii Milan-Atletico (Waxa xigi kara & Milan oo…?)
(Hadalsame) 30 Sebt 2021 – Garsooraha Cüneyt Cakri ayaa kulankii AC Milan iyo Atletico Madrid si xun kabaha ugula tuntay kooxda Rossoneri oo uu bilowgii 2 jaalle oo deg deg oo uu siiyey laacibka Kessie ku halakeeyey.
Wuxuu intii ay ciyaartu socotey oo idil u muuqdey mid inta badan u xaglinayey Atletico isagoo dhowr mar oo ay kubbada ku gacmeeyey diilinta ganaaxa aan xitaa eegin, sidoo kalena isla khaladkii uu Kessie roosada ku siiyey mid ka daran oo lagula kacay Tonali aan xitaa bunisyoon dhigin jaalle iyo roosaba ha joogtee.
Tan ugu daranise waxay ahayd markii uu rigoore aan jirin ka dhigay daqiiqadihii beerdarada, taasoo ahayd kubbad uu Lemar inta gacanta kusoo riixay saaray gacanta daafaca Kalulu.
Si kastaba, UEFA oo ay marar hore cabasho ka qabtey AC Milan ayaa haatan war soo saartay markii ugu horreeysey ku caddaysay in gebi ahaanba uusan rigoore ahayn wixii uu dhigay garsooraha reer Turki ee Cakir kaasoo aan xitaa Var soo eegin.
MAXAA XIGA? Waxba dabcan iskama bedelayaan natiijadii ciyaarta oo 2-1 looga adkaaday Milan, taasoo la dhihi karo waa natiijo uu garsooruhu inta badan gacan ka gaystey marka la eego sidii ay Milan u dheelaysey roosaha kahor, balse waxaa cawaaqib mudan kara Cakir iyo ninkii VAR fadhiyey ee Abdulkadir Bitigen.
La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport iyo qaar kale ayaa sidoo kale qoraya in Cüneyt oo mar u muuqdey garsoore macquul ah aan muddo loo saari doonin ciyaaraha ay dheelayso AC Milan, sidoo kale kulamada muhimka ah sida nus-dhamaadka iyo dhamaadka ayaa laga ilaalin karaa, iyadoo ay dhici karto in muddo la nasiyo isaga iyo Bitigen oo ah ninka eedda ugu badan ku leh rigooraha maadaama uu sheegi waayey in laacibka Lemar uu kubbadda bilowgii taabtay.
AC Milan oo iyada iyo kooxaha kale ee Talyaanigu ay sanadihii dambe gunuunuc ka qabeen sida ay ula dhaqmaan garsoorayaasha UEFA ayaa sidoo kale la sheegayaa inay cabasho rasmi ah u qori doonto UEFA.
Sanadkii hore ayay Milan Europa League uga hartay kaddib markii laga diidey gool sax ahaa oo ay ka dhalisay Man United, kii kasii horreeyey waxaa gebi ahaanba laga saaray tartanka EL iyadoo lagu haysto inay 200m laacibiin kusoo gadatay halka PSG ay lacagtaas hal laacib kusoo iibsato, kii kasii horreeyey Olympiacos ayaa rigoore aan jirin ku reebtay, kii kasii horreeyey sidoo kale Wallcot ayaa rigoore been ah loo dhigay kulankii Arsenal vs Milan.
Previous articleQiimayn lagu sameeyey madaxda ugu ”MUSUQA badan” Afrika (Somalia halkee ka gashay?)
Next articleItoobiya oo dalkeeda ka cayrisey howlwadeenno ka tirsan QM (Nin Soomaali ah oo ku jira)